Harvard University - Study in USA. Fampianarana an-tany hafa Magazine
fanafohezan-teny : HU
Créé : 1636
Aza adino ny iaraho midinika ny Harvard University
Misoratra anarana ao amin'ny Harvard University
Harvard University dia miankina andrim-panjakana izay naorina tamin'ny 1636.
Ny saram-pianarana any Harvard University dia $46,000 (Aprox.).
Harvard Flag Cambridge, Massachusetts, fotsiny ivelan'i Boston. Ny lehibe Harvard tranomboky tranainy indrindra ity tranon'ny rafitra famoriam-bola ao amin'ny Etazonia sy ny famoriam-bola tsy miankina lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao. Misy kokoa ny sekoly noho ny tsy misy farany stacks, anefa: Ny fanatanjahan Harvard ekipa mifaninana ao amin'ny Ivy League, ary ny vanim-potoana mifarana amin'ny baolina kitra “Ny lalao,” isan-taona eo matchup-tantara hoe mpifanandrina Harvard sy Yale. ao amin'ny Harvard, on-toeram-pianarana ponenana trano fonenana dia anisan'ny fiainana mpianatra. Mpianatry ny taona voalohany miaina manodidina ny Harvard Yard eo anivon'ny oniversite, Avy eo izy ireo dia apetraka ao amin'ny iray amin'ireo 12 undergraduate trano ny telo taona sisa. Na izy ireo tsy eken'ny ofisialy ny anjerimanontolo ho vondrona mpianatra, ny valo-lahy rehetra “farany fikambanana” hiasa ho toy ny fikambanana ara-tsosialy ho an'ny mpianatra sasany undergraduate; Harvard koa dimy vavy fikambanana.
Ankoatra ny College, Harvard no mandrafitra ny 13 sekoly hafa sy Institiota, anisan'izany ny ambony-laharana Business School sy Medical School sy ny tena laharana Graduate School Fanabeazana, Sekolin'ny Engineering sy Applied Siansa, Law School sy John F. Kennedy School ny Governemanta. valo U.S. filoha nahazo diplaoma avy any Harvard College, Franklin Delano Roosevelt anisan'izany sy John F. Kennedy. Alumni malaza hafa dia ahitana Henry David Thoreau, Helen Keller, Yo-Yo Ma sy Tommy Lee Jones. In 1977, Harvard nanao sonia ny fifanarahana amin'ny anabavy institiota Radcliffe College, mampiray azy ireo amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fanabeazana manompo lahy sy vavy mpianatra, na dia tsy tamin'ny fomba ofisialy hamihina mandra- 1999. Harvard koa ny lehibe indrindra sekoly fanafiana masina na inona na inona eto an-tany.
Harvard University dia natokana ho tsara amin'ny fampianarana, fianarana, sy ny fikarohana, ary ny fampandrosoana mpitarika ao amin'ny fitsipika maro izay manao ny fahasamihafana manerantany. The University, izay monina any Cambridge sy Boston, Massachusetts, manana Enrollment mahery 20,000 diplaoma kandidà, anisan'izany ny undergraduate, nahazo diplaoma, ary matihanina ireo mpianatra. Harvard dia manana mihoatra noho 360,000 Alumni manerana izao tontolo izao.
Harvard dia fantatra ho mpitarika maneran-tany eo amin'ny fanabeazana, ary ny sampam-pianarana Harvard dia ahitana lehilahy sy vehivavy izay izao tontolo izao-kilasy manam-pahaizana. Faculty mpikambana dia liana, ary liana olona izay manohy ny fikarohana, raha nampianatra tao Harvard. Izay avy any amin'ny manerana ny firenena sy manerana izao tontolo izao, nitondra teo aminy ny harena samy hafa ny fahalalana.
Saika Harvard rehetra College antokony dia natao, nampianatra sy overseen ny Harvard sampam-pianarana, ary saika Fas sampam-pianarana rehetra no takiana mba hampianatra ho anisan'ny ny andraikiny. Amin'ny sampam-pianarana no tena azo idirana, ary Harvard College kilasy habe dia eo ho eo ambany 40, maherin'ny antsasaky ny antokony isan-enim-bolana raha nanatitra sekoly io 10 na latsaka mpianatra. Izany dia mamela ho akaiky kokoa mpianatra-mpampianatra fifandraisana sy manampy ny hevitry ny fiaraha-monina amin'ny oniversite. Mpampianatra ny tenany ihany koa ho azon'ny mpianatra ivelan'ny efitrano fianarana, na dia any an-dafin'ny birao ora, toy ny fihaonana tao amin'ny efitra fisakafoana, na aloha na aorian'ny fotoam-pianarana. Amin'ny sampam-pianarana tao Harvard hanao hevitra ny mampitohy ny mpianatra mba hamoronana izay manatanteraka faminaniana akademika traikefa. Hahafantatra bebe kokoa momba ny University ny fanoloran-tena sy ny Fampandrosoana Faculty Diversity.
Division ny Mitohy ho Education
Harvard Sekolin'ny Dental Medicine
MAHA ANDRIAMANITRA Harvard School
Faculty ny Arts & Sciences
Sekoly Design nahazo diplaoma
Sekoly Arts nahazo diplaoma & Sciences
Harvard John A. Paulson Sekoly Applied injeniera sy ny Siansa
Radcliffe Institute for Advanced Fianarana
Harvard T.H. Chan Sekolin'ny Fahasalamam-bahoaka
Harvard no tranainy indrindra fikambanana ny fampianarana ambony ao amin'ny United States, established in 1636 amin'ny alalan'ny fifidianana ny Lehibe sy ny Foibe Fitsarana ny Massachusetts Bay Colony. Ny atao hoe taorian'ny voalohany College mpanao soa, minisitry ny tanora John Harvard ny Charlestown, izay eo an-pahafatiny tamin'ny 1638 Nandao ny fitehirizam-boky sy ny antsasaky ny toetrany ny andrim-panjakana. Ny sarivongan'i John Harvard mijoro amin'izao fotoana izao eo anoloan'ny Harvard University Hall in Yard, ary angamba no tsara indrindra University fantatra ny mari-toerana.
Harvard University manana 12 Sekoly fanomezana diplaoma-Ankoatra ny Radcliffe Institute for Advanced Fianarana. Ny University nitombo avy amin'ny sivy mpianatra iray tompony ho amin'ny fisoratana anarana mihoatra ny 20,000 anisan'izany ny diplaoma kandidà undergraduate, nahazo diplaoma, ary matihanina ireo mpianatra. Misy mihoatra noho 360,000 Alumni velona ao amin'ny U.S. and over 190 firenena hafa.
The Harvard University Archives dia hatrany amin'ny Harvard University amin'ny rafitra Library ary dia toy ny loharano mba miditra Harvard ny rakitsoratra ara-tantara.
On Sept. 8, 1836, ny faha-roanjato taona amin'ny Harvard fankalazana, dia nanambara fa ny Filoha Josia Quincy nahita ny voalohany gony Sketch ny College fitaovam-piadiana - ampinga miaraka amin'ny teny filamatra "VERITAS" ("Verity" na "marina") amin'ny boky telo - raha fikarohana mikasika ny Tantaran'ny Harvard University ao amin'ny College Archives. Nandritra ny faha-roanjato taona, faneva an-tampon'ny fotsy lehibe iray lainy teo an-Yard nampiseho ampahibemaso famolavolana izany voalohany.
Mandra-Quincy ny baovao, ny tanana tarihin-Sketch (avy amin'ny firaketana an-tsoratra iray ao amin'ny Jan mpiandraikitra fihaonana. 6, 1644) efa fitoriana izy ary adino. Lasa ny fototry ny tombo-kase fomba ofisialy noraisin'ny ny Corporation in 1843 ary mbola mampahalala ny dikan-ampiasaina amin'izao fotoana izao.
Jaky voatendry tamin'ny fomba ofisialy ny loko ho Harvard tamin'ny alalan'ny fifidianana ny Harvard Corporation in 1910. Fa nahoana no jaky? Ny mpivady ny mpivoy, Charles W. Eliot, kilasy 1853, ary Benjamin W. Crowninshield, kilasy 1858, Nanome jaky tava ny ekipa mba mpijery afaka manavaka ny tantsambo Harvard ekipa avy amin'ny ekipa hafa nandritra ny regatta in 1858. Eliot Harvard ny faha-21 lasa filoham-pirenena ao amin'ny 1869 ary nanompo mandra- 1909; ny Corporation bato hanaovana ny volon'ny Eliot ny bandannas ny loko ofisialy tonga tsy ela taorian'ny nidina.
Fa raha tsy mbola ofisialy fifidianana ny Harvard Corporation, mpianatra loko ny safidy efa nisy fotoana nihozongozona eo jaky sy ny magenta - angamba noho ny hevitra ny mampiasa loko mba hisolo tena anjerimanontolo mbola vaovao any amin'ny faramparan'ny taonjato faha-19. Natosiky ny malaza adihevitra ny manapa-kevitra, Harvard undergraduates nanao plebiscite May 6, 1875, ao amin'ny University ny loko, sy jaky nandresy tamin'ny sisiny malalaka. Ny gazety mpianatra - izay efa antsoina hoe The Magenta - nanova ny anarany ny tena olana manaraka.
Taorian'ny George Washington ny Continental Tafika nanery ny Britanika mba hiala Boston tamin'ny volana Martsa 1776, ny Harvard Corporation sy ny mpiandraikitra nifidy Aprily 3, 1776, mba manome mari-pahaizana-boninahitra amin 'ny ankapobeny, izay nanaiky izany andro izany indrindra (angamba tamin'ny Cambridge foibe any Craigie House). Washington avy eo nitsidika Harvard in 1789, tahaka ilay anankiray teo U.S. filoha.
Other U.S. filoham-pirenena mba handray-boninahitra diplaoma dia ahitana:
Ianao ve mila iaraho midinika ny Harvard University ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Harvard University ao amin'ny Map
Photos: Harvard University ofisialy Facebook
Harvard University Hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny Harvard University.